Hiran State - News: Hubkii ugu badnaa ee ay dowlada Erteria u soo dirto Shabaab oo ku soo wajahan Baydhabo.
Hubkii ugu badnaa ee ay dowlada Erteria u soo dirto Shabaab oo ku soo wajahan Baydhabo.
HS:-Hublii ugu badnaa ee ay dowlada Erteria u soo dirto Shabaab oo ku soo wajahan Baydhabo.
Dowlada Eriteria oo wakiil uga ah kooxda Shabaab iyo Al qaacida dhawr wadan si wadankeeda loogu soo marsiiyo kooxdaasi hubka iyo dhaqaalaha ayaa qorsheyneysa iney magalada Baydhabo ka soo dejiso hubkii ugu badnaa ee ay mudo labo sano ah u soo dirto gudaha Somaliya.
Waxaa lagu soo waramayaa iney hada ku sugan yahiin garoonka diyaaradaha magaalada Asmara labo diyaaradood oo kooxdaasi hub u sida si ay dagaal dheer ula galaan ciidamada Kenya ee ku sugan koofurta Somaliya.
Dowlada Eriteria ayaa sidan oo kale xiligii maxkamadaha hub iyo dhaqaalo loogu soo marsiin jiray Shiikh Shariif xiligii uu hogaaminayeye midawgii maxaakiimta oo ay dowlada Ethiopia soo galeen wadanka. diyaaradahan ayaa waxey kooxda u sidaan qoryahay lidka diyaaradaha iyo Anti Tank loo yaqaano iyo risaasta qoryaha fudud.
Dadka ku nool magaalada Baydhabo qaarkood oo indhahooda ku arkey dhawr maalmood ka hor diyaarado ka yimid Eriteria oo gub u sida Shabaab inkastoo shacabkii ka ag dhawaa garoonka diyaaradaha laga raray halkaasi hadane garoonka diyaaradaha kaliya ee u haray Shabaab waa magaalada Baydhabo.
Dhinaca kale ciidamada Kenya iyo kuwa ka soo jeeda jubooyinka ayaa horumar weyn ka sameyey gobolka Jubada hoose iyagoo qorsheynaya iney si nabad ah ula waregaan magaalada Kismaayo maalmaha inagu soo aadan maadama ay inta badan ciidamdii Shabaab ka baxeen gudaha magaalada oo ay ku milmeen shacabka.
· admin on November 04 2011 16:19:06 · 0 Comments · 1858 Reads ·
14,568,373 unique visits